ရွှေကူမေနှင်း – ကဲ … အစက တို့ မပြောလား | MoeMaKa Burmese News & Media
ရွှေကူမေနှင်း – ကဲ … အစက တို့ မပြောလား
(တို့ခေတ်ဂျာနယ် ၁၂ ရက် သြဂုတ်လ ၂၀၁၅) မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၅
ဒီစာရေးဖို့အတွက် အကြာကြီးချင့်ချိန်ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စက ကိုယ်ဝင်မပြောလည်း ရတယ်။ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတာလည်း မဟုက်ဘူး။ ကိုယ့်အကျိုးလည်း တစ်ပြားသားမှ ထိခိုက်တာမဟုက်ဘူး။ နေ မယ်ဆို အနေသာကြီးပါ။
ဒါပေမယ့် လူထုကို ချစ်တဲ့စိတ်၊ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီပြဿနာကို၊ ကိုယ့်ပြဿနာလိုပဲ ခံစားနေ ရတယ်။ ဒီလိုခံစားရတာဟာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလည်း မဟုက်ဘူး။ အဲ ဒီနေ့ကစပြီး ဖုန်းနဲ့ပြောကြတာကို ထောက်ရင်း အများအပြားကလည်း ဒီကိစ္စကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီလ ဒုတိယပတ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ် နှစ်ပြည့်အလှူအတွက်ဖိတ်တဲ့ တယ်လီဖုန်းလည်း ဝင်လာတယ်။ မောင်ဝံသကို ပိုပြီးသတိရတယ်။ မောင်ဝံသရှိ ရင် ဘာပြောမလဲ။ သေချာတာက သူလည်း ကိုယ့်နည်းတူ ခံစားရမှာပါ။ သူပြောဖူးပြီးသားပဲ။ အဲဒီနေ့က သူက အလေးအနတ်ပြောခဲ့တာ။
“ ကိုယ်တို့က အသက်ကြီးလာပြီ၊ မင်းတို့ကိုပဲ အားကိုးရမှာ၊ မင်းတို့အရွယ် လေးဆယ်- ငါးဆယ်ကြား တွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအရွယ်တွေပဲ။ အတွေ့အကြုံလည်း ရခဲ့ပြီးပြီ။ လုပ် ကြပါ” တဲ့။ ကျွန်မက မြို့ထဲလာရင်း သူ့အိမ်ရှေ့က ဖြတ်နေကြ။ အိမ်ရှေ့မှာ သူထိုင်နေတာမြင်ရင် ဝင်နှုတ် ဆက်၊ စကားပြောနေကြမို့ ဒီနေ့တော့ မြတ်စံရောက်နေတာနဲ့ ဆုံတာပါ။
မြတ်စံက ကျွန်မကို ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း ကျွန်တော့ကို မှတ်မိလားလို့မေးတယ်။ ကျွန်မက မမှတ်မိ တော့ဘူးလို့ ဝန်ခံတယ်။ မောင်ဝံသက ဝင်ပြီး “ မြတ်စံ” လေလို့ ပြောတော့မှ ဟယ်… ခနဲ ဖြစ်ရတယ်။ ဝမ်း နည်းလိုက်တာ။ ဒါ… မြတ်စံတဲ့လား။ နှုတ်ခမ်းမွှေတွေနဲ့ အသားကလည်း ညိုညစ်လို့၊ ဝလည်းဝနေတော့ ဘယ် ကလူကြီးလဲလို့ ထင်ရတယ်။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မြတ်စံရယ်… လို့ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ တကယ်က မြတ်စံဆို တာ ငယ်ငယ်ချောချော ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေပဲ။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာတာနဲ့ ခုလို ရင့်ရော်သွားပြီလား။ ဟုတ်တာပေါ့လေ ကိုကိုကြီးတောင်မှ ဦးကိုကိုကြီး ဖြစ်သွားပြီပဲ။ ကိုပေါ်လည်း ဦးမင်းကိုနိုင်တဲ့။
အားလုံး လူ ကြီးတန်း ဝင်ကုန်ကြပြီ။
မြတ်စံက ကျွန်မ (၄၄) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာ စအလုပ်လုပ်စဉ်၊ သူတို့က (၅၄) ထဲမှာ သုံးရောင် ခြယ်ပါ။
“ ခုတော့ ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်တောင်မရဘူး” မြတ်စံက ကြေကြေကွဲကွဲ ပြောနေတယ်။ အပွိုင့်မန့် မပေးဘူးတဲ့။ သူတို့ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့ ခြံထဲကို ဝင်ခွင့်မရဘူးတဲ့။ ကျွန်မက ရယ်မောပြီး နေပေါ့လို့ ဖြေပြောရတယ်။ မောင်ဝံသကတော့ မြတ်စံတို့၊ ကို ပေါ်တို့အားလုံး နိုင်ငံရေးမှာ ဝင်လုပ်ရမယ်လို့ အားကိုးတကြီး အပ်နှံနေလေရဲ့။
ခု သြဂုတ်လ ၂ ရက် အင်တာနတ်ထဲကသတင်းမှာ ကိုကိုကြီးတို့မပါတဲ့အကြောင်း မောင်ဝံသဖတ်မိရင် ဘာပြောရှာမလဲ။ ပြောချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုတွေရေးမလဲ။ သူကသာ အားကိုးနေတာ … သူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ပါတီက တော့ ကိုကိုကြီးတို့ကို မလိုချင်ဘူးလုိ့ လူသိရှင်ကြား ငြင်းပယ်လိုက်ပြီ။
ကျွန်မဆီ ဖုန်းဆက်တဲ့လူအားလုံး ဒေါသဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီိလုိလုပ်ရကောင်းလားလို့ မယုံနိုင်သလို ဖြစ် နေကြတယ်။ အင်တာနက်ထဲမှာလည်း ဒေါသစာတွေ မြင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာလူထုဟာ သနားစရာလည်း ကောင်းတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာ အကြောင်းရှိမှာပေါ့တဲ့။ အစိုးရအဖွဲ့အတွက် လျာထားပြီး ချန်ခဲ့တာများလားတဲ့။ သြော် ကျားကိုက်ပါတယ်ဆို နာတာရှည်လားမေးသလုိ ဖြစ်နေပြီ။ အေးလေ သူတို့က အထင်တကြီးယုံကြ တာကိုး။
လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က အသက်ကိုးဆယ်အရွယ် ဗိုလ်မှူးဟောင်းတစ်ဦးက ကျွန်မတို့ စာရေးဆရာများ သမဂ္ဂကို ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ညစာကျွေးခဲ့တယ်။ သူက ဦးတင်ဦး (NLD) နဲ့ စစ်သင်တန်း တစ်ပတ်တည်းဆင်းခဲ့ သူဖြစ်ပြီး ကိုကိုးကျွန်းပြန်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူက မြန့်မာ့နိုင်ငံရေးကို သုံးသပ်ရာမှာ “ မဆလကို ဖြုတ်ချခဲ့တာ က ကျောင်းသားတွေပဲ။ မင်းကိုနိုင်ကို ခေါင်းဆောင်တင်ရမှာ ခင်ဗျားတို့ Figure ရွေးတာမှားတယ်” လို့ ဆိုခဲ့ တယ်။ အဲဒီဆရာကြီးလည်း အခုသတင်းကိုကြားရင် ဘာထပ်ပြောမလဲ သိချင်ပါရဲ့။
၂၀၁၃ ထဲတုန်းက ပြင်သစ် အခြေစိုက် သတင်းဌာနတစ်ခုက အင်တာဗျူးလာယူတယ်။ နှစ်ယောက်တည်းပါ။ ကိုကိုကြီးနဲ့ ကျွန်မပါ။ သူတို့ မေးခွန်းက တစ်ခုတည်းပဲ။ “ NLD ခေါင်းဆောင်ဟာ ကမ္ဘာ့မျက်နှာစာမှာ လူကြိုက်များမှု ဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ တက်ခဲ့ တယ်။ အခု ဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ကျဆင်းသွားတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ” တဲ့။ ကျွန်မက လူတိုင်းသိသလောက်ပဲ သိတာပါ။ ဒီ တော့ ဘာမှမပြောချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အသံလွှင့်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အတည်ပြုဖို့ပါ ဆိုတာနဲ့ ဖြေခဲ့ပါ တယ်။ ထွေထွေထူးထူးလည်း မဟုက်ပါဘူး။ လက်ပံတောင်းကိစ္စ၊ ရခိုင်ကိစ္စမျိုးပါ။ သူတို့က သိပြီးသားတွေပဲ။ ဒါ နဲ့ကျွန်မက ကိုကိုကြီးရော ဘာပြောလဲ မေးလိုက်တယ်။ သီးခြားစီ၊ တစ်ရက်စီ တွေ့မေးတာကိုး။ ပထမရက် က ကိုကိုကြီးနဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီးပြီ။ အဲလိုမေးတော့ ကိုကိုကြီးက ဒါဟာ “ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး” တဲ့။ မပြောနိုင်ဘူးလို့ ပြောသတဲ့။
အော်… ကိုကိုကြီး၊ ကိုကိုကြီး ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ချင်ရှာလိုက်တာ ခုတော့ ဘယ့်နှယ်လဲ။
“ ကျွန်တော်တို့ သူတို့နဲ့ ပြတ်သွားပြီ”
အဲဒီ စာရင်းထွက်ပြီး နောက်ရက်ကြမှ ကျွန်မက ၈၈ ထဲက ရင်းနှီးသူတစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ဖြစ် ပါတယ်။
“ အခု… မင်းတို့အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ” ဆိုတော့။
“ ကျွန်တော်တို့ သူတို့နဲ့ ပြတ်သွားပြီ” လို့ ဖြေတယ်။
သြဂုတ်လ ငါးရက် ခြောက်ရက်မှုာ အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ထားတယ်။ တစ်ပြည်လုံးက ၈၈ တွေကို ခေါ်ထားတာပါ။
“ မင်းကွာ …. အစ်မပြောတာ လုံးဝနားမထောင်ဘူး။ မင်းတို့ ၂၀၁၂ …. ထောင်က ထွက်ထွက်ခြင်း၊ မင်းတို့ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မယ်ဆုိရင် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်ကြပါ။ ဟိုကိုတော့ သွားမဝင်လိုက်နဲ့နော် လို့ အစ်မ မပြောဘူးလား။”
“ ဟုတ်ကဲ့ အစ်မပြောခဲ့ပါတယ်”
ပြောတာမှ အကြိမ်ကြိမ်နော်၊ မင်းကတော့ အရင်းနှီးဆုံးမို့ တွေ့တိုင်း ပြောတာ၊ မင်းဇေယျာကြီးနဲ့လည်း လလသသ ညီလာခံမှာဆုံတော့ အဲသလို ပြောခဲ့တယ်။ သူက အင်မတန်ရိုး သားတဲ့ မွန်ကြီးပဲ။ ကျွန်တော်တို့မှာ အင်အားမရှိသေးဘူးတဲ့။ဘယ့်နှယ်မရှိရမှာလဲ။ တစ်ပြည်လုံး မင်းတို့ကို ချစ် တယ်လို့ပြောတော့ ခေါင်းညိတ်နေရှာရဲ့။
“ ကိုကိုကြီးကိုလည်း နှစ်ခါမကပြောတယ်။မင်းမှတ်မိလား။ ရန်ကင်းစင်တာမှာ ကိုပေါ်ရဲ့ “ သူကြီးသားမတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်း” ကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေ။ အဲဒီမှာ နောက်ဆုံးပြောလိုက်တာ။ ကိုကိုကြီးကို ပုခုံးဖတ် ပြီး “ တစ်ခွန်းတည်းပြောမယ်၊ ဟိုကို သွားမဝင်နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်” လို့ အဲဒါကွယ် ကိုကိုကြီးက ဘာမှာပြန်မ ပြောပဲ မေးကြောကြီးထောင်အောင်တင်ပြီး တစ်ဖက်ကို ငေးနေခဲ့တယ်။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြတ်သားရတယ်ကွ။ အစ်မပြောတုန်းက စလုပ်ခဲ့ရင် ခုဆိုပြီးနေပြီ။ အားလုံးက မင်း တို့ကို မဲပေးကြမှာပါ။ ကိုပေါ်ကိုတော့ အစ်မ ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။ သူက လွှတ်တော်ထဲမဝင်ဘူး ပြောထား တော့ ပြတ်တယ်။ မင်းတို့က ဝေဝါးဝါးနဲ့ အခုကြည့်စမ်း လူနှစ်ဆယ်တောင် စာရင်းပေးတယ်ဆို။ အကုန်ကန်ထုက် လိုက်တော့ ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ။ မင်းတို့ကို ငါ အစကပြောရက်နဲ့။”
ကျွန်မက သူတို့ကိုပဲ အပြစ်တင်ချင်တယ်။ ဟီးရိုးကိုးကွယ်တဲ့ခေတ် ကုန်ခဲ့ပြီ။ ကိုပေါ်ပြောဘူးတယ် နယ်တိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ် အားလုံး ကွန်ရက်လုပ်ပြီး တစ်ပြိုင်နက် “ မ” လိုက်ရင် ပါလာမှာပဲ တဲ့။ ဟုတ်တယ် လူတိုင်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာ။ ခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း အဆင့်တူ ညှိနှိုင်းရမှာ သူများအောက် သွားဝင်တော့ ခံရတာပေါ့။
ကျွန်မဟာ ရင်ဘက်မှာ တံဆိပ်အတပ်ခံရစဉ် ရယ်နေတဲ့ ကိုကိုကြီးရုပ်ပုံကို တွေးပြီး သူ့ကို ရိုက်ချင်နေ မိတယ်။
Tags: ရခိုင်, ရွှေကူမေနှင်း
ရွှေကူမေနှင်း – ၁၉၉၀ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်ပြီ (0)